आखिर के हो स्थायी राजनैतिक समाधान? - Samay Dainik
August 21, 2019 Samay Dainik
आखिर के हो दार्जीलिङ पहाडको लागि स्थायी राजनैतिक समाधान? भारतीय जनता पार्टीले दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट चुनाउ जित्नुको एउटा मूल कारण वा मुद्दा यो नै थियो। तर चुनाउ सकिएको यतिका दिनसम्म पनि स्थायी राजनैतिक समाधानको नाम स्पष्ट भएको छैन अनि यसबारे दार्जीलिङबाट निर्वाचित बनेर सांसद बनेका राजु विष्टले पनि मुख खोल्नै चाहेका छैनन्। लोकसभा चुनाउको परिणाम घोषणा भएपछि सांसद राजु विष्टले दुइपल्ट दार्जीलिङ पहाडको भ्रमण गरे अनि ती दुवै भ्रमण अवधि उनीअघि स्थायी राजनैतिक समाधान के हो? भन्ने प्रश्‍न खडा गरियो। के अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो स्थायी राजनैतिक समाधान? भन्ने प्रश्‍न पनि उठाइयो। तर यसको उनले यसको ठोस उत्तर दिनै चाहेनन्। उनीअघि यो प्रश्‍न घरिघरि उठिरहनुको एउटा मूल कारण चौरास्तामा आयोजित उनको अन्तिम चुनावी प्रचारमा उनले दिएको भाषण पनि हो। किनभने, उनले दार्जीलिङ लोकसभा आसनको लागि हुने चुनाउ प्रचारको अन्तिम दिन यहाँको चौरास्तामा आयोजित एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खाल्याण्ड अवश्यै ल्याउने वाचा गरेका थिए। उनले गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्दा उनको समर्थनमा चुनाउ मैदानमा ओर्लिएका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीका समर्थक अनि नेतृत्वहरूको खुशीले आकाश छोएको थियो। फलस्वरूप 17औं लोकसभा चुनाउको परिणाम घोषणा भएपछि उनको यस्तो वाचाले गतिलैसित काम गरेको स्पष्ट भएको थियो।4लाखभन्दा अधिकको मतान्तरले राजु विष्टको जीत भएको थियो, जुन आफैमा एउटा नयाँ अध्याय थियो।
यसपछि राजु विष्ट जतिपल्ट पनि दार्जीलिङ पहाड चड्छन्, उतिपल्ट गोर्खाल्याण्डको प्रश्‍न उनीसमक्ष खडा हुनु स्वाभाविक हो। तर जतिपल्ट उनलाई यो प्रश्‍न गरिन्छ, स्थायी राजनैतिक समाधानको वाक्यले गोर्खाल्याण्डको प्रश्‍नलाई छोपिदिने काम गर्न उनी खप्पिस छन्। यसबारे गत केही दिनअघि मात्रै सांसद विष्टले यसो भनेका थिए-भाजपा गोर्खा जातिको पक्षमा छ अनि भाजपा सरकारले गोर्खा जातिको इच्छाको सही सम्मान गर्नेछ। जम्मू-कश्मीर र लद्दाखले केन्द्रशासित प्रदेश पाए भने दार्जीलिङले पनि अवश्यै पाउनेछ। यसको लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। सांसद विष्टले गोर्खाल्याण्डको प्रश्‍न गर्दा स्थायी राजनैतिक समाधान भन्ने गरे पनि स्थायी राजनैतिक समाधानको नाम पनि स्पष्ट पार्न चाहँदैनन्। के गोर्खाल्याण्ड स्थाय्ी राजनैतिक समाधान होइन भने छैटौं अनुसूची हो? जुन मागलाई विगत कैयौं वर्षदेखि गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-ले उठाइरहेको छ। के केन्द्रशासित प्रदेश हो स्थायी राजनैतिक समाधान? किनभने, 17औं लोकसभा चुनाउमा भाजपालाई समर्थन जनाउने अधिकांश पार्टीहरूले केन्द्रशासित प्रदेश दिए, त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने बताएका थिए।
भाजपाले दार्जीलिङको लागि स्थायी राजनैतिक समाधान गरिदिने विषयलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरेको थियो। जसको फलस्वरूप राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको दार्जीलिङ पहाडको लागि स्थायी समाधान गरिदिने वचनलाई पनि पहाडका जनताले पत्याएनन्। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जातिको चिन्हारी रक्षाको लागि आफ्नो पक्षबाट उचित पहल गरिदिने वचन दिएकी थिइन्। उनले 17औं लोकसभा चुनाउपछि जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-को पनि चुनाउ हुनेछ र जीटीएको चुनाउ हुनअघि जीटीएलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसमाथि अवश्यै समीक्षा गरेर उचित कदम उठाइनेछ। ताकि दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ आदि क्षेत्रको लागि राम्रो हुनसकोस्। यसअघि विनय तामाङपन्थी गोजमुमो (गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा)-ले कलकत्ताको ब्रिगेड मैदानमा भएको तेस्रो मोर्चाको भेलामाझ नै गोर्खा जातिको परिचय रक्षाको माग उठाउँदै एक ज्ञापन पेश गरेको थियो भऩे गोर्खा जातिका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउने पनि माग राखेको थियो।
त्यसै विषयलाई केन्द्र गरेर मुख्यमन्त्रीले दार्जीलिङमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशमा तेस्रो मोर्चाको सरकार गठन भए गोर्खा जातिका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउऩे काम गर्ने साथै गोर्खा जातिको चिन्हारी रक्षाको लागि आफ्नो पक्षबाट उचित पहल गरिदिने वचन दिएकी थिइन्। किनभने, वर्ष 2017-मा भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबीचै राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाडका राजनैतिक पार्टीहरूसित द्विपक्षीय बैठक गरेको थियो र एउटा बैठकमा मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीले पहाडका राजनैतिक दलहरूलाई दार्जीलिङ पहाडको लागि स्थायी राजनैतिक समाधान सूत्र खोजी निकाल्ने अपील गरेकी थिइन्। जसमध्ये गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-ले दार्जीलिङ पहाडको लागि स्थायी राजनैतिक समाधान छैटौं अनुसूची हो भन्ने कुरा उठाउँदै आइरहेको थियो। हाल गोरामुमोले पनि स्थायी राजनैतिक समाधान छैटौं अनुसूचीभन्दा सानो भए, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै आइरहेको छ। यसैले स्थायी राजनैतिक समाधान के हो भन्नेबारे अझैसम्म पनि जनता अन्यौलमा नै छन् अनि यो कस्तो रूपको हुन्छ भन्नेबारे भाजपाबाहेक अरू कसैलाई थाह छैन।
सिक्किमको राजनीतिमा नयाँ मोड़ एसकेएम पार्टीमा हड़कम्प
Total views : 1138979